Mpiasam-panjakana Rosiana mahazo baiko hi-‘like’ lahatsoratra ao amin’ny media sosialy mampiroborobo ny Oniversiady Ririnina 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Febroary 2019 13:40 GMT
Vakio amin'ny teny русский, srpski, Français, Español, English
Manome lanja manokana ireny lanonam-panatanjahantena iraisampirenena tahaka ny Oniversiady ireny ny ao Kremlin // kremlin.ru, araka ny CC2.0
Homena baiko hitendry ny ‘ekeko’ (like) sy ‘hamela fanehoan-kevitra miabo’ amin'ireo tsanganana media sosialy mampiroborobo ny Oniversiady Ririnina 2019, lanonam-panatanjahantena taranja maro ho an'ireo atletan'Oniversite ny mpiasa ao amin'ny seha-bahoaka ao Krasnoyarsk, Rosia, araka ny fizotran'ny fihaonana natao tao amin'ny filankevitry ny tanànan'i Krasnoyarsk nivoakan'ny mpikambana iray taloha tao amin'ny serasera.
Ry namana mpiray tanàna, Manolo-kevitra aho fa hanohana amin'ny alalan'ny “ekeko” (like) isika amin'izay zavatra rehetra avoaka ao amin'ny media sosialy ka mifandraika amin'ny Oniversiady eto an-tanànantsika. Zava-dehibe izany. Ambonin'izany rehetra izany satria mandidy ny mpiasam-bahoaka tompon'andraikitra hanao izany ny teboka faha-telo. Fa tsy mila fanorotoroana isika vao hahatakatra fa lanonana manana ny lanjany iraisampirenena io ary iankinan'ny ain-dehibe koa fa madio ny fanatanterahana azy ary mametraka fiheverana tsara.
Naroso tao amin'ny fandaharam-potoana, izay nosoniavin'ny filohan'ny vaomieran'ny raharaha ara-kolontsainan'ny tanàna, ny tetipanorona ao amin'ny media sosialy hampiroboroboana ireo lanonana ao an-tanàna mifanindran-dalana amin'ny Oniversiady izay hotanterahana amin'ny fanombohan'ny volana marsa 2019. Roa ny zava-kendren'izany tetipanorona izany, izay mifantoka manokana amin'ny Vkontakte, tambajotran'i Rosia lehibe indrindra. Ny teboka voalohany sy ny teboka faharoa amin'ny fandaharana no mamariparitra ny iraky ny governemanta amin'ny ‘famoronam-botoaty’ avy amin'ireo andry ara-kolontsaina monisipaly, ao anatin'ireny ny hiran-tsekoly sy mozea, ao amin'ny pejy Vkontakte hampiroboroboana ny Oiversiady. Ny teboka fahatelo mametraka andraikitra amin'ireo filohan'ireo andry mijoro ireo hanome “ekeko sy fanehoan-kevitra miabo” ho apetraka ao amin'ny kaonty ofisialin'ny Oniversiady “ho ao anatin'ny programam-pahitsiana.”
Amin'ny teny hafa, hoterena ho tahaka ny “olombelona raboto” hampiroborobo ny lanonana tohanan'ny governemanta ny mpampianatra sy ny mpiasan'ny mozea.
Tsy vao sambany no nisy toy izao teto Rosia. Tamin'ny herintaona, nitatitra ny Meduza fa nobaikoan'ny manampahefanam-panjakana hi-“ekeko” lahatsoratra ao amin'ny media sosialy ny mpampianatra sy ny mpiasam-panjakana ao amin'ny faritr'i Moskoa, hanjohy izay “ekena” notsindriana ary hanao ny tatitra isam-potoana tamin'izay vita. Nampiasain'ny biraon'ny Ben'ny tanànan'i Moskoa ihany koa ny tambajotran-“olombelona raboto”: mpikatroka pro-governemanta mandray anjara amin'ny fanentanana an-tserasera midera ny Ben'ny tanàna ho takalon'ny fampanantenana fa ho ampidirina ho ao amin'ny governemanta (asam-panjakana?).